Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Balaastikada Caaga ah - Shiinaha Warshadda tubbada jiingado ah
Tuubbada Polyetylen-ka ee ilaalinta fiilada
Maaddada tubadu waa polyetylen. Way fududahay in la rakibo oo la tirtiro, aadna waqtiga u ilaali. Waxaa lagu dabaqi karaa dhismaha mashiinka, qalabka korontada, armaajo koontaroolka korantada. Heerka ilaalinta wuxuu gaari karaa IP68, wuxuu ilaalin karaa fiilada safty. Waxyaabaha ay ka sameysan yihiin tuubooyinka polyetylen-ka waa saliid adkaysi leh, dabacsan, qalafsanaan yar, dusha dhalaalaya, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium ayaa maray RoHS.
Ultra Flat Wave Polypropylene tubbada
Maaddada tubbadu waa polypropylene pp. Habka polypropylene wuxuu leeyahay astaamaha adkaanta sare, caabbinta cadaadiska culus, xirashada caabbinta iyo cillad la’aan, xoog farsamo sare, dabacsanaan xoogaa liidata, iyo dahaadh koronto oo aad u fiican iyo ilaalinta korantada farsamada. Kuma jiraan halogen, fosfooraska, iyo cadmium, oo laga gudbay RoHS. Waxa kale oo ay leedahay iska caabin kiimiko ah oo wanaagsan iyo u adkaysiga daxalka ee wax soo saarka saliidda, sidaa darteed nidaamka dariiqyada oo dhami waxay ku guuleysan karaan saameynta ugu dambeysa ee ilaalinta
Polyamide jiingado tubbada
Tuubooyinka nylon (polyamide), oo loo yaqaan 'tubing PA'. Waa nooc ka mid ah fiber-ka synthetic, oo leh sifooyin jireed iyo kiimiko iyo farsamo oo wanaagsan: iska caabinta abrasionka, waxaa loo isticmaali karaa xaaladda ciidda, qashinka birta; dusha sare, yarayn caabbinta, waxay ka hortagi kartaa miridhku iyo xajmiga miisaanka; jilicsan, fududahay waa qalooca, fududahay in la rakibo oo si fudud loo socodsiiyo
Maaddadu waa polyamide. Midabku waa cawl (RAL 7037), madow (RAL9005). Ololka-celin waa HB (UL94). awoodda kiimikada sare, hantida kiimikada ee xasilloon, halogen-la'aan, xasiloonida heerkulka sare. Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max110 ℃.
Maaddadu waa polyamide. Midabku waa cawl (RAL 7037), madow (RAL9005). Ololka-celin waa HB (UL94). Ma beddeli doonto qaabka dariiqa maraya heerkulka sare. Sicir-bararka, hantida kiimikada ee xasilloon, halogen-la'aan, dabacsanaanta foorarsiga wanaagsan Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max115 ℃, muddo-gaaban150 ℃.
Habka Dab-damiska Olol-gaaska Polypropylene
Maaddada tubbadu waa polypropylene pp. Habka polypropylene wuxuu leeyahay astaamaha adkaanta sare, caabbinta cadaadiska culus, xirashada caabbinta iyo cillad la’aan, xoog farsamo sare, dabacsanaan xoogaa liidata, iyo dahaadh koronto oo aad u fiican iyo ilaalinta korantada farsamada.